I-Ink ehambisekayo: Ixesha lokwenyani, elenzelwe wena kunye noVavanyo lweNtengiso ye-imeyile | Martech Zone
I-Ink ehambisekayo: Ixesha lokwenyani, ukuThengisa ubuGcisa kunye nokuVavanywa
NgoLwesihlanu, Agasti 16, 2013 NgoLwesine, Agasti 15, 2013 Douglas Karr
Uninzi lwamaqonga e-imeyile amile… nje ukuba i-imeyile ishiye umboneleli akukho ndlela yokutshintsha umxholo. Ngelishwa, nangona kunjalo, kuba iziganeko ezinokwenzeka zinokwenzeka kuloo msantsa. Mhlawumbi uyinkampani ye-ecommerce kwaye ngoku uphelelwe yimpahla yentengiso. Ngaba ufuna abantu ukuba bavule kwaye bacofe kuphela ukufumana ukuba imveliso ayifumaneki?
Mhlawumbi uvavanya iindlela ezahlukeneyo zokufowuna kwaye uchonge enye ekhokelela kumanani aphindwe kabini kumanqanaba okucofa, ungayihlaziya i-CTA kwi-imeyile okwangoku kwabo babuyela kuyo okanye abangayivulanga okwangoku? Kunye Iqonga leInki eshukumayo, i-imeyile iyashesha kwaye iphendule ngexesha lokwenyani. Iqonga labo le-Agile yokuThengisa nge-imeyile ikunika amandla okutshintsha imiyalezo kwi-inbox emva Sele bethunyelwe, bekhulisa ukubaluleka, ukubandakanyeka, kunye nembuyekezo kutyalo-mali.
Kuthiwani malunga nokubandakanya ukukhankanywa kweendaba zosasazo kunye nabalandeli ngexesha lokwenyani ngaphakathi komxholo we-imeyile? Iqonga lokuthengisa nge-imeyile eshukumayo likuvumela ukuba wenze ubuqu kwaye uhlaziye umxholo wakho we-imeyile kwibhokisi engenayo.
Nazi ezinye zeempawu eziphambili zefayile ye- Iplatifomu yeInki ehambisekayo:
Umxholo oBukhoma - Faka umxholo ophilayo kwiwebhusayithi yakho, tsala i-RSS kunye API Ukutyisa kwi-imeyile, bonisa ividiyo ngqo ngaphakathi kwibhokisi engenayo, kwaye uqhube amanyathelo akhethekileyo esixhobo (umzekelo, ukufakwa kwesoftware kunye nokwazisa).
Umxholo Umxholo we-imeyile ekujoliswe kuyo lixesha, indawo, isixhobo kunye nemozulu.
Idatha yeMbali Sebenzisa iipateni kunye neendlela zokuphucula ukuhambelana. Isigqibo kubhabho olusekwe kubemi, ukuthengwa kwangaphambili, kunye nedatha yokuziphatha. Dibanisa kunye neenkcukacha zedatha yesithathu kunye nezixhobo zokulinganisa abaphulaphuli.
Uhlalutyo -Iimetrikhi ezihambele phambili ezinokuqonda kubude bokufunda, zivula ngesixhobo, iindawo zabamkeli, kunye nokunye. Fikelela ekunikweni kwengxelo ye-intanethi okanye nge-imeyile ebukhoma
Ukulungiselelwa -Ukuqhuba uvavanyo lwe-A / B lokwahlulahlula kunye nokwandisa amaphulo phakathi kokuthumela. Khetha ukuphumelela uyilo ngokusekwe kukuzibandakanya kwexesha lokwenyani.
Social -Shumeka bukhoma i-Facebook, iPinterest, i-Twitter kunye ne-Instagram zityisa ii-imeyile. Ukuphucula ukuthembeka kunye nokuthembela usebenzisa iigrafu zentlalo ezenzelwe wena.
tags: vavanyoi-imeyile enamandlaUvavanyo lwe-imeyileFacebookinstagraminki eshukumayoeyakho imeyileTwilleyimeyile yexesha lokwenyaniTwitter
IMixpanel: Isiko, uhlalutyo oluqhutywa ngumsitho
Iscup: Ukujonga iMidiya yoLuntu, uHlaziyo kunye nokuzibandakanya